Mpanamboatra gara EV EV | Mpamatsy sy ozinina fiantsenana EV Charger China
EV Fast Charger DC60kw miaraka amin'ny telegrama CCS CHaDEMO ho an'ny Station Charging EV
Product Feature Newya Technology dia manana andiam-pandrefesana manan-tsaina vaovao ho an'ny ekolojia vaovao angovo. Miorina amin'ny antontam-bidy fampidinana an-tsokosoko izay nohadihadiana sy novolavolain'i LINUX, izy no voalohany nahatsapa fidirana an-tsokosoko amin'ny Internet momba ny zavatra sy ny tanàna hendry. Ny lozam-pifamoivoizana DC Newyea Advantage Newyea dia natao ho an'ny famahanana haingana sy mora ny maodelin'ny fiara elektrika rehetra, ao anatin'izany ireo manana rafitra bateria avo lenta. Ny compact an'i Newyea dia ...
EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW ho an'ny EV Charging
FeaturesAdo tsotra plug ary mora milalao tena mety amin'ny fampiasana trano an-trano Tantaram-potoana fampisehoana TOSIKARATRA ankehitriny, fotoana, toerana, lesoka ary hery. Topazo maso dia hahalala ny rehetra! Tafiditra avo lenta Ny endrika mirindra sy matevina dia mora kokoa ny fikojakojana sy ny fandefasana Ny fiarovana bebe kokoa Ny charger dia misy ny mandeha amin'izao fotoana izao, ny herinaratra mahery, ny onja, ny herinaratra ambany, ny fiarovana ny famoahana ary ny fiarovana DC. Efijery super AdvantagesLCD 4.3 "super, afaka manamarina ny fampahalalana momba ny efijery mora foana. Ampifamadiho ny famolavolana, avy eo ny switch ...
Ultrafast EV Charging miaraka amin'ny fitahirizana angovo DC160KW EV Charger haingana
Product Feature mifanentana amin'ny basy CCS, ChadeMO ary GB / T, IEC62196-3 (Combo1 / Combo2). Fahombiazan'ny herinaratra 94%. Fifandraisana an-tariby / Wireless ho an'ny fampidirana amin'ny CMS. Fampisehoana LCD namana ho an'ny interface an'ny mpanjifa. Toeram-piampangana ivelany IP55. Advantage Newyea DC160KW mahafeno ny fepetra takiana amin'ny scenario isan-karazany, City Charging Point: ny charger haingana Newyea DC dia afaka manome "refill" haingana manampy 100 km (62 mi) ny elanelany ao anatin'ny 15-25 minitra. Trano fivarotana / fivarotana: Newye ...
EV Wallbox Home Pro Charger AC7KW ho an'ny EV Charging
Fomba fiasa marobe-protokolola natao: CCS, CHAdeMO, GB / T ； Fandefasana fiampangana ： OCPP1.6 ； Fifaneraserana tariby / tsy misy tariby amin'ny fampidirana CMS. Fampisehoana LCD namana ho an'ny interface an'ny mpanjifa. Toeram-piampangana ivelany IP54. Afaka manome fitaovana famerana izay mifanaraka amin'ny fenitra samihafa ary ampanjifaina ho takiana aminao. Advantage Ny rindrin'ny rindrin'ny AC AC Newyea dia mpamaky trano vaovao sy sarobidy be eny an-tsena. Izy io dia manome ny kalitao miavaka andrasana amin'ny mpitarika an'izao tontolo izao amin'ny charg ...
Smart Charger Battery Fast Integrated Smart for Electric Vehicle DC283 KW Fast Charger
Ny vokatra azo avy amin'ny vokatra dia hatramin'ny 240KW DC miaraka amin'ny GB / T, IEC62196-3 (Combo 1 / Combo 2) basy 94% fahombiazan'ny herinaratra Fifandraisana sy tariby tsy mitambatra amin'ny CMS. Fampisehoana LCD namana ho an'ny interface an'ny mpanjifa. Toerana famerenam-bola any ivelany ID 55 Advantage Newyea DC280KW dia mety ho an'ny orinasa akaikin'ny interstates sy ny làlambe lehibe hanomezana ny mpamily EV famerenam-bidy haingana, ary azo ampiasaina amin'ny toeram-piasana, manome fomba haingana ny mpiasa hanatsarana rehefa mila izany. Hybrid mennekes AC ...
EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW miaraka amin'ny APP Control
FeaturesAdo tsotra plug ary mora milalao tena mety amin'ny fotoana-mivantana Voltage ankehitriny, fotoana, toerana, lesoka ary hery. Topazo maso dia hahalala ny rehetra! Tafiditra avo lenta Ny endrika mirindra sy matevina dia mora kokoa ny fikojakojana sy ny fandefasana Ny fiarovana bebe kokoa Ny charger dia misy ny mandeha amin'izao fotoana izao, ny herinaratra mahery, ny onja, ny herinaratra ambany, ny fiarovana ny famoahana ary ny fiarovana DC. Efijery super AdvantagesSuper 4.3 ”, afaka manamarina mora foana ny fampahalalana momba ny efijery. Ampifamadiho ny famolavolana, avy eo afaka manomboka na ...
7KW EV Wireless Charging System Ho an'ny fiara fitobian'ny garazy fiara
NEWYEA Teknolojia 7 KW rafitra famandrihana tsy mifandraika maoderina dia vahaolana natao ho an'ny famahanana tsy misy tariby ny fiara elektrika. Mizara roa ny rafitra: mandefa sy mandray. Ny ampahany mampita dia misy ny boaty fanaraha-maso mamindra sy ny coil mpampita, ary ny ampahany mandray dia ny boaty fanaraha-maso mandray sy ny coil mpandray. Raha ampitahaina amin'ny rafitra famandrihana fifandraisana, ny rafitra famindrana angovo tsy misy tariby dia manana tombony amin'ny fandidiana tsotra, safet ...
EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW miaraka amin'ny OCPP 1.6 & 2.0
Fomba fitantanana fiampangana ara-barotra. Hifehy lavitra ny tobim-pamandrihanao amin'ny Protocol OCPP. Fanaraha-maso sy fanaovana tatitra. Hanara-maso sy hanitsy ny fanjifana herinaratra. Toekarena. Safidio ny vidin'ny angovo anao ary avelao ny rafitra hiasa ho azy ny fotoana mora indrindra hampiasana ny EV anao. AdvantagesMore Durable PV VO fitaovana pc avo lenta manokana dia mahazaka fanimbana, fanipazana ary tontolo masiaka hafa. Fomba fiasa feno OCPP Ny antontan-taratasintsika dia manana ocpp1.6-J fiasa feno, ao anatin'izany ny fiasa fototra. Smart charge, ap ...
Newyea R&D centre misy profesora, dokotera, tompo ary injeniera zokiolona avy any an-toerana sy any ivelany, mifantoka amin'ny fivoaran'ny teknolojia famaranana tsy misy tariby sy tariby ho an'ny fiara elektrika, teknolojia famahanana herinaratra kely sy salantsalany ary vahaolana vaovao, manarona 10.000 metatra toradroa tsy miankina Ny biraon'ny R&D sy ny laboratoara R&D mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena voalohany dia mampihatra modely fanavaozana ny rafitra mpanjifa, mampahafantatra ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetra ...
EV Wallbox Comercial Charger AC7KW miaraka amin'ny Socket sy Cable Connector
Product Feature7KW EV Home Charger dia mpandraharaha AC dingana iray tokana misy fivoarana 32A farafaharatsiny, natao manokana hampiasaina manokana. Miaraka amin'ny famolavolana mirindra sy ny habeny mirakitra, mamonjy habaka izy ary mora ampiasaina, izay vahaolana mety indrindra ho an'ny tranonao sy ny orinasanao. Ny charger dia mety amin'ny fampiharana anatiny sy ivelany, miaraka amin'ny fiarovana hatramin'ny IP65. Izy io dia manohana ny fametrahana rindrina amin'ny rindrina ary ny fametrahana ny gorodona. Miaraka amin'ny modely WIFI natsangana nanohana ny fifandraisana OCPP p ...
30KW EV Wireless Charging System ho an'ny EV Charging Station
Tamin'ny taona 2014 dia nampidirina an-tsena ny famandrihana tsy misy tariby ho an'ny fiara elektrika ary ny NEWYEA no mitarika ny fiakaran'ny haitao sy ny fenitra.
EV Wallbox Commerce Charger AC7KW Mifanaraka amin'ny tariby Type 1 na Type 2
Charger ara-barotra momba ny vokatra 7KW dia natao ho an'ny besinimaro amin'ny fanamarinana RFID. Ampiasaina amina sokajy famandrihana karazana 2, ny charger dia mifanaraka amin'ny tariby karazana 1 na karazana 2. Mifanaraka amin'ny fenitra indostrialy, ny charger eva ara-barotra dia mampiasa metatra voamarina MID mba hiantohana ny fahamarinan-toerana sy ny RCD namboarina hiarovana ny filaminana. Ny charger dia misy koa ny famoahana leakage 6mA DC, izay manala ny filàna fiakarana lafo vidy amin'ny karazana RCD B. Azo ampifandraisina amin'ny charg ny charger ...